Waxqabadka la bixin deeq dhiig Taibao Group - Shiinaha Shandong Zhongbaokang Medical
Waxqabadka deeq dhiig aan la bixin ee Taibao Group
On June 12,2017, Taibao Group compined Center Dhiig Zibo bilaabay olole ay ku deeqdo dhiigga, wadar ahaan 220 shaqaalaha ka qayb-deeqidda waxay si firfircoon. At 8:30 am, dabaqa koowaad ee shaqaalaha maqaayadda Taibao Group qolka ku meel gaadh ah deeq dhiig u soo jeestay, meesha bannaan ee waxaa loo kala qaybiyey aagga tashi, meesha la ogaado, goobta dhiig iyo meelaha kale. In ka badan ah kalkaaliyayaasha darsin dhiig waday qalab imtixaan iyo ururinta dhiig xirfadeed si ay u bilaabaan shaqada. In waxqabadka, Guddoomiyaha Taibao Group xilkan Duanzhou ayaa hogaanka ku deeqidda dhiigga aan la bixin oo ku yidhi hawl-deeqidda dhiigga laga abaabulay Taibao Group shan jeer. Markan, in ka badan 500 oo shaqaale ah ayaa jawaab codsiga firfircoon, iyo ugu dambeyntii in la soo qaato qaar ka mid ah shaqaalaha, kuwaas oo kulan xaalado in ay ka qayb this deeq dhiig aan la bixin. Ka qayb qaadashada deeq dhiig aan la bixin ma aha oo kaliya ay wanaajisaa jacaylka iyo mas'uuliyadda shaqaalaha, kaxeeya dad badan in la ogaado oo ka qayb-deeqidda dhiigga aan la bixin, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa dad badan oo u baahan gargaar. Waxaan diyaar u ah inay u qabanqaabiyaan waxqabadyo macno leh sida ganacsi oo bulsho ahaan masuul ka tahay. Isla maalintaas, Taibao Group, wadar ahaan 220 shaqaalaha daryeelka ku lug leh hawlaha deeq dhiig iskaa wax u qabso, mugga dhiigga wadareed gaaray ku dhowaad 60000 ml. Dhamaadka deeq dhiig, shaqaalaha ayaa sidoo kale helay qadiin ah ee ay bixiso xarun dhiigga magaalada iyo saliid la cuni karo, ukunta iyo kabayaasha kale nafaqada ay bixiyaan Taibao Group.
waqti Post: Aug-02-2018